“မောငျ့ကိုကားပေးမလို့ မောငျးမာလား စီးမားလား ပွော…” ဆိုပွီး အမိုကျစားပုံရိပျတှခေပြွလိုကျတဲ့ မကျြဝနျး – Alanzayar
“မောငျ့ကိုကားပေးမလို့ မောငျးမာလား စီးမားလား ပွော…” ဆိုပွီး အမိုကျစားပုံရိပျတှခေပြွလိုကျတဲ့ မကျြဝနျး
မျောဒယျလောကိုဝငျရောကျလာတာ မကွာသေးပမေယျ့ ပရိသတျအမြားအပွားရဲ့ ဝနျးရံအားပေးမှုကို တဖွညျးဖွညျးရရှိလာတဲ့ မျောဒယျဖွဈပါတယျ။……
ပုရိသပရိသတျအမြားရဲ့ ဝနျးရံအားပမှေုကို ရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမညျရရှိထားပွီး ရပေနျးစားနသေူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။….
မကျြဝနျးရဲ့ ဆကျဆီကပြွီး အမိုကျစားပုံလေးတှနေဲ့ ညို့အားပွငျးပွငျးဆှဲဆောငျနိုငျသူလေးဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှိလူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားကာ အမြိုးသားပရိသတျတှေ ဝနျးရံနကွေတာလညျးဖွဈပါတယျ။…..
သူမရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါတှငျ အမြားဆုံးတငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ မျောဒယျမကျြဝနျးကတော့ မိမိုကျနတေဲ့ဖကျရှငျလေးနဲ့ ဆကျဆီကကြလြှပနတေဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှနေဲပ ပရိသတျတှအေသညျးကို လှုပျခါလိုကျပါတယျနျော။…
မျောဒယျမကျြဝနျးဟာ ပုံလေးတှထေဲမှာ ဆကျဆီကကြဆြှဲဆောငျမှုရှိရှိနဲ့ လှပလှနျးနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ မျောဒယျမကျြဝနျးရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့နဲ့ လှပလှနျးနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျရပါတယျနျော။….. crd
“မောင့်ကိုကားပေးမလို့ မောင်းမာလား စီးမားလား ပြော…” ဆိုပြီး အမိုက်စားပုံရိပ်တွေချပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း
မော်ဒယ်လောကိုဝင်ရောက်လာတာ မကြာသေးပေမယ့် ပရိသတ်အများအပြားရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။……
ပုရိသပရိသတ်အများရဲ့ ဝန်းရံအားပေမှုကို ရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည်ရရှိထားပြီး ရေပန်းစားနေသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။….
မျက်ဝန်းရဲ့ ဆက်ဆီကျပြီး အမိုက်စားပုံလေးတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်းဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ အမျိုးသားပရိသတ်တွေ ဝန်းရံနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။…..
သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် အများဆုံးတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ မော်ဒယ်မျက်ဝန်းကတော့ မိမိုက်နေတဲ့ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျလှပနေတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲပ ပရိသတ်တွေအသည်းကို လှုပ်ခါလိုက်ပါတယ်နော်။…
မော်ဒယ်မျက်ဝန်းဟာ ပုံလေးတွေထဲမှာ ဆက်ဆီကျကျဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ လှပလွန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်မျက်ဝန်းရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ လှပလွန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။….. crd
Previous Article မနက်ဖန်မှာထွက်မယ့် ချဲဂဏန်း(3D) တစ်ကွက်ထဲအပိုင်အောဖို့ တင်ပေးလိုက်ပီနော် (ပေါက်ချင်သူများအတွက်)..a
Next Article 2022 အတွက် သင်္ကြန်စာ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ အရမ်းကောင်းပါတယ် (ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်လိုက်ပါ)